RW Rooble oo wali kulamo siyaasadeed ka wadda Muqdisho | KEYDMEDIA ONLINE
MUQDISHO, Soomaaliya - Ra’iisul Wasaaraha cusub ee Soomaaliya, Maxamed Xussen Rooble ayaa dadaal ugu jira kasbashada Xildhibaannada Gollaha Shacabka sidii kalsoonida u siin lahaayeen marka uu hortago maalmaha soo socda.
Wuxuu Rooble maalintii shalay la kulmay ku dhawaad 50 Xildhibaan, oo miisaan culus ku leh Gollaha Shacabka, wuxuuna halganka uu wado la kaashanayaa Madaxda Maamullada iyo Xafiiska Madaxweyne Farmaajo oo lacag badan ku bixinaya sidii uu RW cusub ku heli lahaa codka kalsoonida Baarlamaanka.
Magacaabista Rooble waxay kusoo beegantay xili mudo-xileedka dowladda ay ka harsan tahay 4 bilood, iyadoo laga sugayo Rooble howl culus oo ugu horeyso doorasho inuu dalka ka qabto waqtigii loogu tala-galay, iyadoo aan jirin wax diyaarsan oo ku howlgal.
Gudigii doorashooyinka qaran ee Xaliima Yareey madaxda u ahayd, kaasoo markii hore ku yimd heshiis siyaasadeed oo ahaa inuu maamulo doorashadda 2020-2021, ayaa meesha laga saarey kadib markii uu Farmaajo ka ogolaadey Madaxda Maamullada in la sameeyo gudi kale oo ka kooban DF iyo Maamul Goboleedyada.
Dadka falanqeeya arrimaha Siyaasadda ayaa sheegay in Ra'iisul Wasaare Rooble laga doonayo inuu xoogga saaro Hal arrin oo ah in dalka ay ka dhacdo doorasho waqtigeeda ku qabsoonta. [Halkan ka akhri warbixin]